जनवरी मा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
रातो ईट्टाको पूर्व होक्काइडो सरकारी कार्यालय लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्य हो। हिउँमा शटरस्टकको साथ जाडोको समयमा आकर्षणको दिन चित्रित
यस पृष्ठमा, म जनवरीमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा वर्णन गर्नेछु। यदि तपाईं जनवरीमा होक्काइडोमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, कृपया कोट जस्ता पर्याप्त जाडो संरक्षण नबिर्सनुहोस्। होक्काइडोको पश्चिम तर्फ जापानको सागरबाट आउने बादलहरू हिउँ पर्नेछ र यति धेरै हिउँ टाढा पर्थ्यो। होक्काइडोको पूर्वपट्टि, हिउँ पछाडि पश्चिम तिर झर्दैन। यद्यपि तापमान कहिलेकाँही फ्रिजिंग बिन्दु १० डिग्री तल झर्छ। कृपया सावधान रहनुहोस्। यो लेखले तपाईंलाई होकाइडोको जनवरीको मौसम कल्पना गर्न सहयोग पुर्‍याउन धेरै चित्रहरू समावेश गर्दछ, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
तल जनवरीमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे केही लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्।
जनवरी र होक्काइडो बारे प्रश्न र उत्तर
जनवरी मा होक्काइडो मा मौसम (अवलोकन)
जनवरीको शुरूमा होक्काइडो मौसम
जनवरीको मध्यमा होक्काइडो मौसम
जनवरीको अन्तमा होक्काइडो मौसम
के होक्काइडोमा जनवरीमा हिउँ पर्दछ?
यो जनवरी मा Hokkaido भर घाम लाग्छ। विशेष गरी मध्य जनवरीदेखि, त्यहाँ धेरै हिउँ छ। जापानको सागरबाट ओसिलो बादलले होक्काइडो पहाडहरूमा हिर्काउँछ र हिउँ निम्त्याउँछ यो अक्सर जापानको समुन्द्र नजिकको निसेको, ओटारु र सप्पोरोमा सुक्खा हुन्छ। अर्कोतर्फ, प्रशान्त पक्षको पूर्वी होक्काइडोमा, यो धेरै चिसो छ, तर त्यहाँ तुलनात्मक हिसाबले थोरै छ।
जनवरी मा होक्काइडो कत्ति चिसो छ?
यो जनवरी मा होक्काइडो मा धेरै चिसो छ। सप्पोरो जस्ता सहरी क्षेत्रहरूमा पनि, दिनको अधिकतम तापक्रम लगभग जमिनभन्दा कम हुन्छ। यदि तपाईं जनवरीमा होक्काइडो भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई जाडो सुरक्षा चाहिन्छ।
होक्काइडोमा हामीले कस्तो किसिमको कपडा लगाउनु पर्छ?
तपाईंसँग जनवरीमा पूर्ण-जाडोको मौसम हुनुपर्छ। यस पटकको लुगाको बारेमा कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यदि तपाईं सुन्दर हिउँ दृश्यको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, जनवरी-फेब्रुअरी उत्तम समय हो। फेब्रुअरीको शुरुमा, जाडो उत्सवहरू सप्पोरो र असाहिकावा लगायत होक्काइडोमा आयोजना हुनेछन्। यदि तपाईं ग्लैमरस जाडोको उत्सव हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं फेब्रुअरीको शुरुमा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ, फेब्रुअरीको तुलनामा जनवरीमा कम पर्यटकहरू हुनेछन्, त्यसैले तपाईं जनवरीमा अपेक्षाकृत शान्त वातावरणको आनन्द लिनुहुनेछ।
जनवरी मा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
ग्राफ: जनवरी मा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
तपाईंले माथिको ग्राफबाट देख्न सक्नुहुनेछ, जनवरी मा होक्काइडो लगभग विश्व जमेको तर्फ छ। यो टोकियो, ओसाका, क्योटो आदि भन्दा धेरै चिसो छ। होशियार रहनुहोस्।
एक पैदल यात्री रातमा फ्रिज गरिएको सडक सतह पार गर्दै। जनवरी २०१ 2017 सप्पोरो शहर केन्द्र होक्काइडो, जापान = शटरस्टक
जनवरीमा तापक्रम प्राय: दिनमा during डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुँदैन। मध्यरात र बिहान फ्रिजिंग पोइन्ट १० डिग्रीभन्दा कम हुन्छ।
पश्चिमी शहरहरू जस्तै सप्पोरो, हाकोडाटे, ओटारु र असाहिकावामा हिउँ पर्दछ। पहिले, म यस समयमा साप्पोरोको बाहिरी भागमा उजाडस्थानमा हिंड्दै थिएँ र म हिउँमा दफन हुन लागेको थिएँ।
प्रमुख शहरहरूमा प्रमुख सडकहरूमा हिउँ हटाउने कार्य राम्रोसँग गरियो। यद्यपि तपाईले माथिको चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, सडकहरू स्थिर र यति फिसलन छ।
होक्काइडोको मध्यभागका हिमाली क्षेत्रहरू हिउँले बन्द भएका छन्। तापमान कम छ, हिमपात को हीरा धूलो भनिने एक गहना जस्तै चम्किन्छ सक्छ। पहिले, म हिराको धुलो हेर्न पहाडमा गएँ, म छक्क परें किनकि यो एकदम चिसो थियो।
होक्काइडोको पूर्वपट्टि रहेको शहर, तापक्रम काफी कम हुन्छ। उत्तरी शहर अबाशिरीमा, तापक्रम २० डिग्री सम्म ठण्डबाट तल झर्न सक्छ। यसभन्दा पहिले, म समुद्रबाट एक तीव्र हावाबाट उडेर आबाशिरीको बाहिरी भागको चट्टानमा उडाएको थिएँ, शरीर साँच्चै शीतल भएको थियो। अबाशिरीमा बस्ने मानिसहरू भन्छन् कि यो विगतमा धेरै चिसो थियो।
यस्तो देखिन्छ कि ग्लोबल वार्मिंगको कारण यो हालसालै केही तातो भएको छ। अझै यो साँच्चिकै चिसो छ, त्यसैले सावधान रहनुहोस्।
मैले निम्न पृष्ठमा चिसो संरक्षणको बारेमा लेखें। यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया पृष्ठ पनि हेर्नुहोस्।
जाडोमा जापानमा कस्तो किसिमको कपडा लगाउने भन्ने कुरा मैले अर्को २ पृष्ठमा सन्दर्भ जानकारीको सारांश दिएँ। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्।
जापान मेटेरोलोजिकल एजेन्सी द्वारा जनवरीमा जारी गरिएको होक्काइडोको मौसम तथ्यांक तल छ।
होक्काइडोमा मौसम डेटा (जनवरीको सुरूवात)
साप्पोरो 0.2 ℃ (-6.3 ℃) 40.0mm (58 सेमी)
ओटारु 0.0 ℃ (-5.3 ℃) 53.2mm (65 सेमी)
Asahikawa -2.8 ℃ (-11.4 ℃) 23.7mm (59 सेमी)
Biei -3.6 ℃ (-14.3 ℃) 15.4mm (60 सेमी)
फुरानो -3.4 ℃ (-14.1 ℃) 16.7mm (55 सेमी)
Wakkanai -1.6 ℃ (-5.8 ℃) 29.1mm (52 सेमी)
अबाशिरी -1.3 ℃ (-8.3 ℃) 18.8mm (35 सेमी)
उटोरो -1.5 ℃ (-7.3 ℃) 28.3mm (55 सेमी)
नेमुरो -0.1 ℃ (-5.9 ℃) 13.2mm (19 सेमी)
Kushiro 0.4 ℃ (-9.3 ℃) 17.1mm (14 सेमी)
ओबिहिरो -1.2 ℃ (-12.8 ℃) 15.9mm (21 सेमी)
Hakodate 1.4 ℃ (-5.3 ℃) 30.2mm (36 सेमी)
जनवरी ०,, २०१ 09; जापानको ओटारु, होक्काइडो, जापानमा शीत महोत्सवमा ट्रे वा हिउँ राफ्टि withको साथ हिउँ स्लेडि on खेल्दै महिलाहरू = शटरस्टक
तपाईंले माथिको तालिकाबाट देख्न सक्नुहुनेछ, प्रायः जाडोको समुद्रको नजिकै रहेको सप्पोरोमा हिउँ पर्दछ। ओटरुमा जापानको समुद्री किनारमा हिउँ पर्दछ। अर्कोतर्फ, पूर्वी होक्काइडोमा अवस्थित प्रशान्त क्षेत्रमा कुशिरोमा त्यति हिउँ परेको छैन।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (जनवरीको मध्य)
साप्पोरो -0.7 ℃ (-7.1 ℃) 32.5mm (52 सेमी)
ओटारु -0.9 ℃ (-6.1 ℃) 38.2mm (56 सेमी)
Asahikawa -3.7 ℃ (-12.3 ℃) 20.7mm (53 सेमी)
Biei -4.5 ℃ (-15.5 ℃) 14.0mm (58 सेमी)
फुरानो -4.3 ℃ (-15.2 ℃) 14.8mm (54 सेमी)
Wakkanai -2.9 ℃ (-6.9 ℃) 25.3mm (55 सेमी)
अबाशिरी -2.6 ℃ (-9.4 ℃) 18.1mm (36 सेमी)
उटोरो -3.1 ℃ (-9.0 ℃) 22.3mm (51 सेमी)
नेमुरो -1.3 ℃ (-7.0 ℃) 11.5mm (21 सेमी)
Kushiro -0.9 ℃ (-10.5 ℃) 13.5mm (16 सेमी)
ओबिहिरो -2.1 ℃ (-13.5 ℃) 13.1mm (20 सेमी)
Hakodate 0.5 ℃ (-6.5 ℃) 21.3mm (38 सेमी)
जनवरी १,, २०१:: अज्ञात पदयात्रीहरू जाडोमा जापानमा हिउँ र पातविर रूखहरूको साथ पुरानो सप्पोरो सरकारी कार्यालय भवनको अगाडि हिंड्दै जापान = शटरस्टक
जनवरी बीचमा, यो बिहान र बेलुका चिसो हुनेछ। तापक्रम दिनको समयमा पनि बढ्दैन। त्यहाँ अधिक हिउँ हुनेछ।
होक्काइडोको ट्रेनहरू र बसहरू सामान्यतया राम्रोसँग सञ्चालन हुनेछ यदि यो स्नुस भए पनि। तर भारी हिउँका दिनमा ढिलाइ हुन सक्छ। त्यसैले होशियार हुनुहोस् कडा तालिकाको लागि यात्रा नगर्नुहोस्।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (जनवरीको अन्तमा)
साप्पोरो -1.1 ℃ (-7.5 ℃) 41.1mm (63 सेमी)
ओटारु -1.2 ℃ (-6.7 ℃) 50.9mm (73 सेमी)
Asahikawa -4.0 ℃ (-13.1 ℃) 25.2mm (62 सेमी)
Biei -4.8 ℃ (-16.2 ℃) 16.6mm (61 सेमी)
फुरानो -4.5 ℃ (-15.9 ℃) 18.2mm (58 सेमी)
Wakkanai -3.4 ℃ (-7.7 ℃) 29.9mm (66 सेमी)
अबाशिरी -3.1 ℃ (-10.4 ℃) 17.7mm (33 सेमी)
उटोरो -3.7 ℃ (-10.2 ℃) 32.3mm (62 सेमी)
नेमुरो -1.9 ℃ (-7.8 ℃) 10.8mm (23 सेमी)
Kushiro -1.3 ℃ (-11.3 ℃) 12.7mm (13 सेमी)
ओबिहिरो -2.3 ℃ (-14.5 ℃) 13.8mm (18 सेमी)
Hakodate 0.3 ℃ (-6.8 ℃) 25.7mm (43 सेमी)
January० जनवरी २०१:: राजा पेंगुइन हिंड्ने परेड शो आसपासका मानिसहरू असाहिमा चिडियाघर, असाहिकावा, होक्काइडो, जापानमा रमाईलोको साथ हेरिरहेका थिए = जापान = शटरस्टक
यो जनवरीको फेब्रुअरी देखि फेब्रुअरीको पहिलो आधा देखि वर्षको सबैभन्दा चिसो हो। यदि तपाईं वास्तवमै चिसो होक्काइडोमा यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ भने यो समय उत्तम हो। असाहिकावाको असाहिमा चिडियाखानामा, पेन्गुइनहरू जो चिसो मन पराउँछन् तपाईंलाई भेट्न धेरै खुशी छन्, जुन माथिको चित्रमा देखाइएको छ।
यस समयमा हिउँ धेरै पस्दछ। जमिनमा हिउँ प्रयोग गरी हिउँ चाडहरूको तयारीहरू विभिन्न स्थानहरूमा सुरु हुन्छ। हिउँ चाडहरु फेब्रुअरी को शुरू देखि फेब्रुअरी को बीच मा आयोजित गरीन्छ।
यदि तपाईं माथिको भिडियो हेर्नुभयो भने, तपाईं यस अवधिमा होक्काइडोको मौसम कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस् मुख्य सडकको फुटपाथ हिउँबाट खाली छ, कृपया सावधान हुनुहोस् किनकि सडक सतह स्थिर हुन्छ।